how can I read myanmar font on this site? - MYSTERY ZILLION
how can I read myanmar font on this site?
I've installed unicode and zawgyi, but I can't read very well. plz, help me.
Mozilla Firefox သုံးတယ်ထင်တယ်။ နောက်ဆုံး Version ကိုပဲသွင်းပါ။ Zawgyi က Version ဟောင်းလည်းရပေမယ့် Unicode တွေနဲ့ကျတော့စာကောင်းကောင်းမပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တက်တယ်။ Default Font မှာ Zawgyi ကိုထားလိုက်ပါ။ font ရွေးတဲ့ဘေးနားမှာ Advanced ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒိအထဲဝင်လိုက်ရင်အောက်နားမှာ Character Encoding ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။ Unicode (UTF-8) ဆိုတာရွေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆို Zawgyi ရော Unicode ရော font ပြောင်းနေစရာမလိုပဲကြည့်လို့ရတယ်။ Zawgyi font ကလည်းအဟောင်းတွေဆို Unicode (UTF-8) Encoding နဲ့တွဲသုံးရင် Unicode မပေါ်ဘူး။ ဒီဟာကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Zawgyi font ပါ။ မရှိသေးရင်ယူလိုက်ပါ။
thanksalot for help, bro.